Ukubuyekezwa kweSwagbucks (2020) - Ingabe kungumthetho noma umkhonyovu? - Buyekeza
Ukubuyekezwa kweSwagbucks (2020) - Ingabe kungumthetho noma umkhonyovu?
AmaSwagbucks akhululekile ukusebenzisa ipulatifomu ukuthola imali. Abafundi abaningi basebenzisa iwebhusayithi ukwenza imali ethe xaxa. Yindawo efanelekile yezintshisekelo zakho.U-2020 ube unyaka ogcwele ukuhamba nge-rollercoaster. Noma ngubani ofuna ukuzijabulisa ngenkathi ehola imali angakha i-akhawunti. Kunemisebenzi ehlukene nezinhlolovo zakho. Kuyindlela elula yokusebenzisa isikhathi esithile nokwenza imali esheshayo. Noma ngubani ofuna isisombululo ezinkingeni zakhe zemali angatshala imali kule nsizakalo. Ipulatifomu ibilokhu ikhona iminyaka eminingi. Izigidi zabafundi ziyazuza kusixhumi esibonakalayo sayo esisebenziseka kalula.
Ukubuyekezwa KwamaSwagbucks - Konke Kuchaziwe
Ama-Swagbucks ayipulatifomu enhle kakhulu yokuqala uhambo lwakho lokuhola online. Iningi labantu lihlangana nale webhusayithi nge-YouTubers. Bebelokhu bezwakala kakhulu ngale nkundla kusukela ekuqaleni.
Kunconywa yizindawo ezithandwayo zezindaba ezifana nokuthunyelwe kweBuzzfeed neHuffington. Kuyo yonke le minyaka kube nezibuyekezo eziningi kule nsizakalo. Uyabona ukuthi ukwakheka kwepulatifomu nakho kuyaphendula impela. Sizokhuluma ngokuningiliziwe ngezinzuzo zokubhalisa namaSwagbucks. Bayishintshe ngokuphelele indlela owenza ngayo imali esheshayo.
Ibhokisi le-Android TV elihamba phambili - Ukubuyekeza kochwepheshe
Ama-Emulators ama-5 ahamba phambili we-Android
Isebenza kanjani iSwagbucks?
Inqubo yokwenza imali ngama-Swagbucks ilula impela. Noma ngubani angabhalisa epulatifomu yakhe ukwenza imali. Kungumsebenzi olula onemizamo embalwa kakhulu. Kunezindlela ezahlukahlukene ongazama ngazo. Kulo mhlahlandlela, sizokhuluma ngezinye zezindlela eziphawuleka kakhulu.
1. Thola amaphuzu
Kukhona uhlelo lwamaphuzu lokusebenzisana ongazuza ngalo. Abasebenzisi kufanele bathole amaphuzu ngokuqedela imisebenzi emincane. La maphuzu angahle abonakale engaphansi ekuqaleni, kepha ngokuhamba kwesikhathi lawa ayanezela. Noma ngubani angasebenzisa izingqinamba ngokuhamba kwesikhathi. Ungabona izipho ezingakhohlwayo nemivuzo yokuqoqa amaphuzu. Uhlelo kulula ukuyisebenzisa. La maphuzu abizwa ngokuthi ama-SB noma ama-Swagbucks. Lapho uqoqa inani elithile, ama-SB akhokhelwa ukuthola imivuzo yemali yangempela.
2. Yenza izinhlolovo
Kunokuningi okulula ukugcwalisa ucwaningo olutholakalayo. Noma ngubani emhlabeni jikelele angazithatha. Kunemikhawulo yesifunda yokuthola imiphumela emihle kakhulu. Ungathola imivuzo ehlukile ngokuthatha lezi zinhlolovo. Amaphuzu azongezwa ngokushesha ku-akhawunti yakho. Lokhu kumnandi futhi kulula ukugcwalisa ama-poll. Izinhlangano zibambisana nama-Swagbucks ukuletha imibono yamakhasimende. Akunamsebenzi kunoma ngubani ukujoyina. Ungalindela ukubona imiphumela ngokuya ngokuziphatha kwakho kokuthenga. Yonke inhlolovo ihlukile kubasebenzisi.
3. Qoqa amakhadi ezipho
I-Swagbucks ikunikeza ngamakhadi wesipho ayingqayizivele. Kunezinketho eziningi ongakhetha kuzo kuwebhusayithi yabo. Njengomfundi, unganciphisa izindleko zakho eziku-inthanethi. Kufanele uthenge ngezizathu ezahlukahlukene. I-Swagbucks ikunikeza i-Amazon, i-PayPal, izingoma ze-Apple, nabanye abaningi.Okuthandayo kakhulu inketho ye-PayPal. Abasebenzisi bangahlenga imali yabo etholakalayo ngemali yangempela ngale nkundla.
Lezi bekuyizinyathelo ezintathu ezilula ongazisebenzisa iwebhusayithi yeSwagbucks. Ipulatifomu yabo emnandi igcwele isimanga esikhulu. Sisho umongo wokusebenza kwabo ngalesi sigaba.
Ukulinganiselwa kweSwagbucks Survey nezinye izindlela zokwenza imali:
Kwamanye amazwe, akuvamile ukuthi kube khona ucwaningo olukhokha kakhulu. Kungenxa yokutshalwa kwemali okuphansi okuvela ezinkampanini zenkampani yangaphandle. Ama-Swagbucks awanakubekwa cala ngalolu daba. Ukulwa nale nkinga, beze nezixazululo ezihlukile. Izindaba ezimnandi ukuthi awuxhomekile kakhulu kuSurveys ukuze uzuze. Abasebenzisi bangakhokhelwa ngokwenza imisebenzi eyisisekelo. Nazi ezinye zezindlela ezintsha nezinhle zokwenza imali ngeplatifomu.
1. Nikeza izindonga
I-Swagbucks yiwebhusayithi edumile ku-inthanethi. Bahlanganyele nezinkulungwane zemikhiqizo emhlabeni jikelele.Ungathola okunikezwayo okumnandi kuwebhusayithi yabo. Izokwehlisa izindleko zokuthenga kwakho.
Abasebenzisi bangathola okunikezwayo okusha okumangalisayo ngenkathi bethenga izingubo, izincwadi, nezinye izinto eziningi ezibalulekile. Sincoma ukuzama lokhu uma ufuna ukwandisa ukufinyelela kwakho. Kukhona ukukusiza ngokuqukethwe. Kuza nokunikezwa okufana namasampula amasha wamahhala, imikhiqizo yokuhlola, nokunye okuningi okuqukethwe kwasekuqaleni.
2. Thenga usebenzisa ama-Swagbucks
Ipulatifomu ikunikeza amaphuzu nezaphulelo zokuthenga usebenzisa ipulatifomu. Igxila kuzo zonke izinhlobo zezinsizakalo ezihlobene nabafundi.Siyayijabulela indawo ngenxa yezaphulelo ezinhle kakhulu. Njengomfundi, ungonga imali eningi ngale nsizakalo. Ikholomu yezitolo nayo ikunikeza amaphuzu. Abasebenzisi bathola amaphuzu okubuyisa imali ngokusebenzisa lezi ziphulelo. Luhlelo olusebenzisanayo nolubandakanya wonke umuntu olusebenza kahle kakhulu.
Bangabalingani nabathengisi abangaphezu kwe-1500 emhlabeni jikelele. Ukuxhumana nale webhusayithi kuphelele kuzo zonke izidingo zakho. Kubandakanya i-amazon, ilitshe, neWalmart njengabalingani babo abaqondile.
3. Bukela amavidiyo
AmaSwagbucks futhi anezindlela ezinhle nezimnandi zokuthola imali. Abasebenzisi bangabuka amavidiyo ambalwa okujabulisa ukuqoqa amaphuzu. Lokhu kuzofaka ngokuhamba kwesikhathi. Ngo-2020 wonke umuntu ubheke ukusakaza okuqukethwe okusha. Ama-Swagbucks yindawo enhle yokukhokhelwa ngokubuka okuqukethwe.
Uzobuzwa imibuzo embalwa eyisisekelo ngemuva kokubona ividiyo. Kuyindlela elula nehehayo yokuthola imali. Banohlu lwadlalwayo oluyindawo lwayo yonke imisebenzi yakho. Noma ngubani angasebenzisa lesi sici. Ayikho imikhawulo.
4. Dlala imidlalo
Yipulatifomu kuphela ekukhokhelayo ngokudlala imidlalo. Kunezihloko ezinkulu zokuqala nezintsha ezitholakalayo lapha. Ukuhlala unamathele ekhaya akukuhle. Singachitha isikhathi esithile kukhompyutha yakho noma ocingweni lwakho ukudlala imidlalo. Lokhu kuzokunikeza imivuzo ekhokha kakhulu.
Ungathola amathiphu lapho uzama imidlalo kubalingani be-Swagbucks. Kuyisibonelo esihle sokuhola imali ukuze ujabule.
5. Ukuseshwa kwewebhu
Injini yokusesha yeSwagbucks ikukhokhela ukusesha iwebhu. Akutholi lula kunalokhu kunoma ngubani.Sijabulela leplatifomu yokwabelana okulula kwemibono. Imiphumela yokusesha inembile.
I-Yahoo inguzakwethu osemthethweni wewebhusayithi yale nsizakalo. Kuyindlela enhle yokuthola imali ngenkathi wenza ubuncane obungenalutho. Wonke umuntu uhlala esebenzisa i-google, i-bing, noma i-yahoo ukubheka okuqukethwe ku-inthanethi. Ama-Swagbucks enza kube mnandi futhi kuzuzise ngasikhathi sinye.
Lezi ngezinye zezindlela zokuthola imali endaweni yesikhulumi. Ilungele wonke umuntu ochitha isikhathi esiningi ku-inthanethi. Bhalisela insizakalo yabo namuhla bese uthole imivuzo emikhulu.
Ungalanda Kanjani i-Swagbucks App?
Uhlelo lokusebenza lwe-Swagbucks luyatholakala kumadivayisi we-smartphone. Noma ngubani angalanda futhi asebenzise insiza.Kuyinto ngempumelelo kakhulu izidingo zakho.Izixhumanisi zizokusiza ukuthi ufake uhlelo lokusebenza efonini yakho. Sincoma ukuthi uzame namuhla.
Qala ukuhola imali kusuka efonini yakho namuhla!
AmaSwagbucks yiwebhusayithi ephelele esiza abafundi ukuthi baphume. Ngokuhamba kwesikhathi, ungathola imali enhle ngepulatifomu. Kulo mhlahlandlela, sihlanganisa yonke imininingwane yomsebenzi wabo ngokuningiliziwe. Sithemba ukuthi unesikhathi esihle sokuhlola izinketho. Thola amadola kanye ne-swag yakho ngama-Swagbucks.
Ukulandwa kwamahhala kweRoblox (2020)
I-Wyze Watch Pre Order - Ungawuthenga Kanjani Umhlahlandlela?